Umthetho usuzovumela ukuba indeni esencane ingcwatshwe - Bayede News
UShenge ukhala ngokuhlanekezelwa komlando
Kuye kube buhlungu lapho abazali sebezitshelile ukuthi bazoba nomntwana kepha ekugcineni kungenzeki ngenxa yezimo ezithile. Phakathi kokunye kuba wukuphuphuma kwesisu noma kube yizinkinga ezidalwa wukuphambana kwezinto ngesikhathi sokukhulelwa.
Okubanga ubuhlungu obukhulu wukuthi abazali baye bangakwazi ukuzingcwabela indeni (umbungu womuntu) abesebeyithatha njengengane yabo ngenxa yemithetho ebekwe uHulumeni. Lesi simo senza ukuthi kube nzima kwabehlelwe yilo mshophi ukuthi bamukele futhi basheshe bakudlulise okwenzekile.
Cishe ukungcwaba lokho-ke obese kubhekwe ukuthi kuyoba wutho empilweni yabazali kodwa ngeshwa kwangenzeka, kungawapholisa amanxeba.
Ukuncishwa leli lungelo sekuzoba wumlando njengoba iNkantolo Enkulu yasePretoria isinike abazali ilungelo lokungcwaba indeni uma befisa.
UMehluleli uNomonde MaMngqibisa Thusi unqume ukuthi iSigaba soMthetho iBirths and Deaths Registration Act (BDRA) – ebesichaza indeni enamasonto angaphansi kwangama-26 njengento nje (medical waste) okufanele ishishwe – asihambisani noMthethosisekelo wezwe.
Ube esebekela iPhalamende izinyanga ezili-12 ukuba lichibiyele lo Mthetho kepha kusalindwe lokhu, izisebenzi zezempilo zingasikhipha isitifiketi sokufa, uma kucele abazali, ukuze kungcwatshwe.
Nokho lokhu ngeke kwenzeke lapho ingane ikhishwe ngenxa yezimo zezempilo noma kuhushulwe isisu.
Ngaphambi kwalokho, iNkantolo YoMthethosisekelo kuzomele isiqinisekise lesi sinqumo ngaphambi kokuba siqale ukusebenza.
Lokhu kulandela isicelo esafakwa eNkantolo inhlangano iVoice of the Unborn Baby neCatholic Archdiocese of Durban bemangalela uNgqongqoshe Wezasekhaya noWezempilo ngalo Mthetho ovimba ukungcwatshwa kwendeni.
Abamangali bebethi lo Mthetho, ovumela kuphela ukuthi kukhishwe isitifiketi sokufa uma ingane izalwe isishonile indeni isinamasonto angaphezulu kwangama-26, awunanhlonipho, unesihluku futhi awunabuntu.
Abameli babamangalelwa batshele iNkantolo ukuthi lokhu kunyathela amalungelo esithunzi, empilo yangasese, enkolo nokulingana.
Abamangalelwa bephikisa lesi sicelo esifakwe uNks uSona Smith weVoice of the Unborn Baby, bathe lokhu akakwenzeli ukusiza umphakathi kepha ubheke ukwenza inzuzo yemali njengoba enguMqondisi wenkampani yabangcwabi.
“Njengoba omunye wabamangali engumqondisi omkhulu wenkampani yabangcwabi, kuyangabazisa ukuthi ngempela lokhu akwenzayo ukwenzela amalungu eVoice of the Unborn Baby,” kusho abamangalelwa emaphepheni abo abebewafake eNkantolo.
Ethula isinqumo uMehluleli uMaMngqibisa Thusi, uthe umama nobaba abasuke sebelindele ukuba ngabazali basuke sebeyilungiselele kakhulu ingane ngokwengqondo futhi ubuchwepheshe obusezingeni eliphezulu buyakwazi ukubona indeni isesesibelethweni.
Uthe ukungcwaba indeni, kuhambisana namasiko, kungasiza kakhulu ukubhekana nalesi simo sokulahlekelwa kwabese benethemba lokuthi kuzoba ngumntwana wabo.
Abameli babamangali bathe awukho umthetho noma isayensi okweseka ukuthi umthetho ungavumeli ukungcwatshwa kwendeni enamasonto angaphansi kwangama-26.
“Ngeke kwaphikwa ukuthi ezisebenzini zezempilo indeni ingaba yizibi nje. Kodwa kwabebelindele ukuba ngabazali, akusiyo into engalahlwa nje, kumele lokhu obekungaba ingane futhi kwezinye izimo ebisilindelwe isikhathi eside.
Ukuthatha indeni njengezibi, ngale kwamaningi, akunazwelo futhi akunanhlonipho,” kusho uMehluleli uMaMangqibisa Thusi.
Uqhube wathi asikho isizathu esiphusile sokwehlukanisa phakathi kwezinhlobo ezahlukene zokufelwa kokhulelwe ngoba “ubuhlungu buzofana ekugcineni ngeke ibe khona ingane ezozalwa iphila”.
Uthe: “Ungashaywa umthetho ukuze kubuyiswe isithunzi sabazali abalahlekelwe. Ngokuvumela ukuthi kungcwatshwe, kuzosiza kakhulu ukwehlisa ubuhlungu nokupholiswa kwamaxeba.”
UMthetho oqondene nokubhaliswa kwezingane ezizelwe nabashonile uthi emveni kokuchitheka kwesisu, indeni enesikhathi esingaphansi kwamasonto angama-26 kumele ilahlwe ngoba ngeke ikwazi (indeni) ukuphila ngaphandle kwesibeletho emveni kwalesi sikhathi.
Ukuze ungcwabe indeni, kumele kube nesitifiketi sokufa khona kuzokhishwa isaziso somngcwabo.
UMnyango Wezempilo noWezasekhaya uthi indeni enesikhathi esingaphansi kwamasonto angama-26 ngeke yaphila ngaphandle kwesibeletho ngakho-ke asidingeki isitifiketi sokufa noma ukuba ingcwatshwe.
IVoice of the Unborn Baby
Le nhlangano yasungulwa uNks uSmith emveni kokuba ebona isisebenzi sasesibhedlela sicinga emfucuzeni indeni engamawele amathathu eyaphuma emva kokuba unina echithekelwe yisisu.
UNks uSmith uthe ukwenqabela abazali ilungelo lokungcwaba ingane eshonile kubaphuca ilungelo labo elikuMthethosisekelo lokulingana, lesithunzi nelempilo yangasese.